खरिदार प्राविधिक पदमा आवेदन खुला - Everest Dainik - News from Nepal
खरिदार प्राविधिक पदमा आवेदन खुला
काठमाडौं, चैत ३० । नेपाल स्वास्थ्य सेवाका चौथो तह तथा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), खरिदार वा सो सरहका पदहरुमा निम्न सेवा, समूह, उपसमूहका पद संख्याको लागि आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न देहाय बमोजिमका योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट आयोगको अनलाइन माध्यम द्वारा दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।
निम्न योग्यताका इच्छुक उम्मेदवारले अन्तिम मिति २०७४–१–१९ र दोब्बर दस्तुर २०७४–१२६ सम्म भर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । आवेदन फारामको शुल्क रु. ३००।– (तीन सय) र प्रत्येक समावेशी समूहको लागि रु. १५०।– (एक सय पचास) थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ ।
विस्तृत विवरणका लागि तलको तालिकामा हेर्नुहाेस्-
ट्याग्स: Exam Form, loksewa